Merobichar (मेरो बिचार): बेलायती बजारमा चाइनिज सामानको प्रभुत्तो
Merobichar (मेरो बिचार)
बेलायती बजारमा चाइनिज सामानको प्रभुत्तो
भरतपुर १२/१९३ चितवन
बेलायत बिश्वको नाम चलेको शक्तिशाली राष्ट्र। प्रजातन्त्र र सोतन्त्रताको जननी देश। खुला ‌अर्थतन्त्र, मानव अधिकार सम्पन्न सम्युक्त अधिराज्यको मुद्रा पाउण्ड सँसारका महङ्गो मुद्रामा पर्दछ । ।बेलायतीहरूको जीवनस्तर अति नै उच्च मानिन्छ।उनीहरूको प्रतिवेक्ति आय २९,६०० डलर छ।
चीन जनसङख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो देश। बिश्वका पाँच भागको एक भाग सिङ्गै चीनले ओगटेको छ। एक अरब तीस करोडको बिशाल जनसङ्ख्या र तिनले प्रयोग गर्ने सरसामानको प्रतिसतले सिङ्गो चीनको अर्थतन्रलाई सँकेत गर्दछ।राजनैतिक हिसाबले कम्युनिष्ट राष्टका रूपमा बिश्वकै लगभग समाप्त प्राय ब्यवस्थाको प्रतिनिधित्तो गर्ने यस देशले सन् १९९० पछिको दशकमा धेरै फड्को मारेको देखिन्छ। के यो फड्को कम्युनिष्ट ब्यवस्थाकै प़तिफल हो या दुनियाँमा प्रचलित मुल्य र मान्यतासम्मत खुला अर्थतन्र र उदारबादतर्फको चीनको उन्मुखीकरण? यधपि राजनैतिक विश्लेषण मेरो सानो लेखको अभिष्ट होइन। छोटो समयमा छिमेकी देशले बिश्वका महाशक्ति राष्टहनरुमा आफ्नो उत्पादनको बजार कसरी बढाइरहेछ, कसरी बिश्ब पुँजि चीनतर्फ लागानिका लागि लम्किरहेछ भन्ने जानाकारि गराउनु मात्रै हो। चीनका सुधारवादी नेता देंग सियावोपिंगको बिशेष आर्थिक क्षेत्र Special Economic Zone (SEZ) का रुपमा सन १९७९ मा स्थपना भएको उक्त औधोगिक कार्यक्रम पुजिबाद तर्फको कम्युनिस्ट चीनको ठूलो फड्को थियो । आज ३०/३२ बर्षमा सान्जेन् संसारकै आर्थिक पावोर हाउसको रुपमा विश्वकै उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बनेर रहेको छ ।
तात्कालीक रुपमा बेलायतको अधिनमा रहेको पुजिवादी शैलिको बिशाल हङ्कङ्गको नजिकै दछिणि भागमा रहेको सेन्जेन शहर चीनकै द़ुतत्तर गतिमा लाम्किरहेको उत्पादन केन्द़ हो। सँसारमै छिटो छिटो विकाश र आधुनिकीकरण तर्फ लम्किरहेको सेन्जेनमा उत्पादित विभिन्न सामानहरुले एतिखेर बेलायती बजारहरु र तिनका ठुलाठुला सपिङ्ग मलहरु भरिएकाछन् ‘मेड इन चाइना’ का छापहरुले। सेन्जेनको एउटै कम्पनीले एक वर्षमा तीस करोड टाई उत्पादन गर्दछ। अर्को कम्पनीका २८० उत्पादन लाइनहरुमा सँसारकै सात भागको एक भाग जुत्ता मोजाको उत्पादन हुन्छ। गत वर्ष बिक्रि भएका सबै घडिहरुको आधा हिस्सा सिँगो सेन्जेन शहरको उत्पादन थियो। सँसार भरिको खेलउना व्यबशायको नब्बे प्रतिसत, डिभिडी व्यबशायको साठी प्रतिसत, माइक्रोवोइभ उत्पादनको ४० प्रतिसत, टीभी ३० प्रतिसत ,वासिङ मेशिन २५ प्रतिसत उत्पादन चीनले गर्दछ। हरेक बर्ष पचास लाख मोवाइल फोन चाइनिजहरुले किन्ने गर्छन्।चाइनिज अर्थतन्र अमेरिकी भन्दा तीन गुणाले बढिरहेको छ। यस्ले सँसारको ४० प्रतिसत कँक़िट,२५ प्रतिसत स्टिल प़योग गर्दछ। दुईसयवटा एअरपोर्ट र धेरै पावर स्टेसनहरुको निर्माण कार्य दिनानुदेन भइरहेको तथ्यले चीनको बढ्दो सुन्दर भबिष्य देखाइरहेछ।
बेलायतका मार्क एण्ड स्पेन्सर, वि एच एस, टेस्को, आस्दा, मदर केयर, नेक्स्ट जस्ता नाम चलेका सपिङ्ग मल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा प्रयोग हुने सस्ता कपढा, जुत्ता, क्यामेरा, भिडियो लगायतका सामानहरु सबै चीनमा उत्पादन हुने गर्छन्। बेलायतका पाँचसय भन्दा बढी कम्पनीहरुको लगानी सेन्जेन शहरवरिपरि रहेको छ। चीनको सस्तो श्रमबजारले दुनियाँका पुँजिपतिहरुलाई लगानिको ढोका खोलिदिएको छ। त्यसैले त १६ करोड चाइनिजहरु उत्पादन कार्यमा जुटेकाछन् बिभिन्न बहुराष्टिय कम्पनीहरुमा।सन् २०१२ सम्ममा चीनसँगको बेलायती ब्यपार २१.७ विलियन पाउण्ड पुग्ने पूर्वानुमानले बेलायती बजारमा चाइनिज सामानको प्रभुत्तो देखाउँदैन र?
चाइनाको यस्तै रफ्तारको उत्पादन र विकासक़म रोकिएन भने यस्ले बेलायतलाई माथ गरेर सँसारको चौथो ठूलो धनी राष्ट हुने छ छिट्टै नै। सन् २०३० सम्ममा चाइनाले अमेरिकीहरूलाई चुनौती दिने भबिश्यबाणी गरिएको छ। चाइनिज सामानहरुको बजार बेलायतमा मात्र नभएर विश्वभरिनै फैलिएको छ अन्तराष्टिय जालोको रुपमा।हरेक देशलाई सस्तो सामान पस्किएर चाइनाले गुन लगाएको छ। यो लेख पढिरहँदा तँपाइले लाउनु भएको कुनै एक चिज अवश्य चाइनामै बनेको हुनु पर्छ।
३०/३२ बर्ष अघि सेन्जेन सुतिरहेको गरीवीले भरिएको माछा मार्ने गाऊँ थियो। मावोकालीन कामदारहरु साइकल चढेर धानखेतका आली हुँदै कम्युन फार्महरुमा काम गर्न जान्थे। आज सेन्जेन आधुनिक चाइनाको मुटुको टुक्रा भएको छ। सँसारको कार्यशालाको रूपमा एक करोढ मान्छेहरुको आत्मा बनेको छ। व्यस्त सँसारका अन्यान्न शहरहरुझै सान्जेन चुनौतिका रुपमा ठडिएको छ न्यूयोर्क, टोकियो र लन्डन जत्रै र जस्तै बन्ने होडमा।
सेन्जेन मात्र नभएर चाइनाका सवै शहरहरुको स्वरुप बदलिएको छ। हिजो सम्म बाइसाइकलको शहर भनेर चिनिने ठाऊँ आज बिएम डब्लुको शहरमा बदलिइरहेको छ। माओ सुट गुस्सि सुटमा बदलिएको छ। धान खेतहरु ठूला ठूला कारखानाहरुले भरिएका छन्। शहर व्यस्त र व्यग्र रुपमा बिकसित भइरहेछ पर पर सम्म आखाँले नभ्याउन्जेल।
चीन दिनानुदिन विकाश र उन्नतितिर लम्किरहेपनि अति जनसंख्याका कारण अझैपनि पश्चिमा देशहरुको तुलानामा पुग्न गार्हो पर्दैछ। शहरहरुको अलावा गाऊँहरुको स्थिति सुखद् छैन्। गरीवी व्याप्त छ गाऊँभरि। तीस करोड गाऊँलेहरु कामबाट बन्चित छन्। आगामी १५ बर्ष सम्ममा तिनीहरु शहर पस्ने छन् राम्रो कामको खोजिमा। अझैपनि चाइनिजहरुको ठुलै हिस्सा बेलायत,अमेरिका,जापान,अष्टेर्लिया तिर कामको खोजिमा धाउने क्रम जारिनै छ।
सारँसमा नेपालका दुई छिमेकी राष्ट चीन र भारत दुबैको जनसँख्या दुई अरब भन्दा बढी रहेको र दुवैले आर्थिक उन्नतितिर आफूलाई उस्साहितरुपमा धकेलिरहेको बर्तमान परिस्थितिका सामु हामीले सिक्नु पर्ने पाठ के? देशका राजनेताहरुलाई चेतना भया ! हमिसबैले कामना गरौ सरकारविहीनताको चाडै अन्तहोस् कम्तिमा थपिएको समयसिमा भित्रै संबिधान बनोस् । जलस्रोतको मात्र बिकाश गर्न सके नेपाल आफ्ना उदाउदा दुई छिमेकीहरुलाई बिजुली बेचेरै बिकासको गतिमा लम्किने थियो ।
-हाल: संयुक्त अधिराज्य बेलायत
Posted by Ram at 11:35 PM
Good one, reality, true.
January 22, 2011 at 3:53 AM
नाइजरको गरीवी र बेलायतीहरूको अपील